Ndị Ọrụ Uwe Ojii n'Anambra Anwụchikọọna Ndị A na-Enyo Enyo na Ha Bụ Ndị Ohi na Ndị Otu Nzuzo
Ndị ọrụ uwe ojii na steeti Anambra nọrọ n'izu gara aga wee nwụchikọọ mmadụ dị iri atọ n'ọnụ ọgụgụ, bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ohi na ndị otu nzuzo. Mmadụ iri abụọ na abụọ n'ime ndị omekoomè a ka a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo, ebe mmadụ asatọ ndị ọzọ bụ ndị a na-enyo na ha bụ ndị ekperima.
Ihe e nwetasịrị n'aka ndị ahụ gụnyere: egbe 'AK47' na-agba ọnụ narị atọ iri isii na isii; ọtụtụ nsụnsụ egbe dị iche iche, uwe ndị otu IPOB, ọgwụ agwọrọ agwọ na otụtụ ihe ndị ọzọ e ji ebibi ndụ.
Ka ọ na-akpụgharị ndị ahụ n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Amawbịa, onye isi ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ maazị Garba Umar sị na mmadụ abụọ n'ime ndị ahụ --- Peter Onyebụchi na Nnaemeka Ugwuokpe bụ ndị 'otu mmadụ isii', ndị ahụ gbagburu otu uwe ojii ma zukwa ohi n'ebe dị iche iche a na-ere mmanụ ọkụ na steeti ahụ n'ọnwa gara aga.
Ọ sị na otu onye n'ime ndị ahụ a na-enyo enyo, bụ Kenneth Chiemezie bụ onye otu ọzọ na-eji ọgbaa tum tum ezu ndị aka ha dị ọcha ohi ma sịkwa na o duuru ndị uwe oji wee ga gosi ha ebe ndị na-amụgosi ha ọrụ na-ezo.
Maazị Umar sị na ndị ahụ niile ekwupụtachago ihe dị iche iche ha mere na akụmakụ ha kụrụ; na ha na-enyezịkwara ndị uwe ojii ahụ aka na nnyocha ha iji wee nwụchikọọ ndị otu ha ndị fọrọ afọ.
Ka ọ na-ekwupụta ihe o mere, Peter Onyebụchi, onye sịrị na ọ bụ onye na-azụ ahịa n'ahịa ebe a na-ere ihe ndị e ji arụ ụlọ n'Ogidi, kwetara ma kwuo hoohaa na egbe 'AK47' ahụ e nwetere n'ụlọ ya bụ nke otu enyi ya a na-akpọ 'Trigger', bụ onye ọ sị na ọ na-akwapụ n'ụlọ ya ugbu a.
Ndị a bụzịkwa ndi a ga-anọ oge na-adịghị anya wee kpụpụ ụlọ ikpe ma e mechaa nnyocha, ka e wee jiri usoro iwu wee nyụchaa ha anya.
N’ozi anyị siri n’aka ndị ngalaba asụsụ Igbo nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Voice of Nigeria nwete, onye i...
Egwu bu onye amaghị agba, o kwebe n'isi. Ọ bụ ọtọpuru keleke isi. Egwu bụ ụda ọma a nụrụ na ntị ma...
A dọọla ndị ọrụ nchekwa dị iche iche n'ala anyị aka na ntị banyere otu ha si ete ọtụtụ ụmụ mmadụ u...
Aka na-achị Steeti Imo bụ gọvanọ Rochas Okorọcha adọọla ọha mmadụ aka na ntị ka mmadụ ọbụla gharak...
Ọ bụ nnọọ ụwa bịa kirie, dịka ụmụafọ, ndi enyi, ndị nwadiala, ikwu na ibe nakwa ndị agbataobi obod...
A kpọkuola gọọmenti etiti ka o were ọsọ were ije kwụọ gọọmenti steeti Anambra ego karịrị ijeri naị...
Ndi otu na-eme ngagharị iwe ma na-akpọkwa oku ka onye isi ala bụ Muhammad Buharị chighata malite ọ...
A kpọkuola ụmụafọ steeti Anambra bi n'ebe dị iche iche n'ala Naịjiria na na mba ofesi ka ha latar...